ရေခဲနှစ်မျိုးလုံးသောက်ရန်အတွက် Charmlite အသစ်ထုပ်ထားသော Tumbler ၁၆ အောင်စ - BPA အခမဲ့ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Charmlite
အပူနှင့်အအေးနှစ်မျိုးလုံးအတွက် Charmlite အသစ်ထုပ်ထားသော Tumbler 16 အောင်စ - BPA အခမဲ့
Charmlite 2020 အသစ်စတိုင်ကျသောခွက်ဖလားကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရအဖုံးသို့မဟုတ်မပါဘဲပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤသည် tumbler BPA အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, ခဲနှင့်အဆိပ်အတောက်မဟုတ်သော, နှောင့်အယှက်မရှိအနံ့ဆိုး။ အပူရောအအေးနှစ်မျိုးလုံးအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ အပြင်, ငါတို့စိတ်ကြိုက်အရောင် box ကိုထုပ်ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
2. ပစ္စည်း: ပလပ်စတစ် (AS)
3.Peture: BPA အခမဲ့၊ အစားအစာတန်း
4. အရောင် & လိုဂို: စိတ်ကြိုက်
5.Manufacture: Funtime ပလပ်စတစ်
2020 အသစ်တီထွင်မှို။ ပိုသော chic စတိုင်ဒီဇိုင်းကို insulator တွင်လည်း tumbler ။ နံရံနှစ်ထပ်ကို ultrasonic ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အဖုံးပေါ်တွင်အပေါက်တစ်ခုရှိသည်။ ဤနေရာတွင် Straw ကိုထည့်နိုင်သည်။ ဖောက်သည်များအတွက်အလွန်အဆင်ပြေ။ နှင့်ရှင်းလင်းဘို့အလွန်လွယ်ကူသည်။
ဒီ Insulated Tumbler ကို ultrasonic အားဖြင့် insulator တွင်လည်းသောနှစ်မြို့ရိုးကိုအတူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖန်ခွက်ကအအေးသောက်သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပါ။ ကိုင်ထားသည့်အခါသင့်အအေးမခံစားရပါ။ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူပါတီပွဲ၌သို့မဟုတ်မဲဆွယ်စည်းရုံးချိန်တွင်ဤတုန်ခါမှုကိုယူပါ။ သူတို့ကဓာတ်ပုံတွေကနေကြည့်ကောင်းတယ်။ ပြီးတော့ဒီဖန်ခွက်ကိုပြန်သုံးလို့ရတယ်၊ အကြိမ်ပေါင်းများစွာသုံးနိုင်တယ်။
နှင့်ဤ tumbler အချိုရည်များယိုဖိတ်မှုကိုတားဆီးနိုင်သည့် lids နှင့်အတူလာနိုင်ပါတယ်။ အဖုံးရဲ့ထိပ်မှာအပေါက်တစ်ပေါက်ရှိတယ်။ သင်မလိုအပ်သည့်အခါအပေါက်ပိတ်နိုင်သည် သင်အဖုံးမလိုအပ်ပါကသင်သည်လည်းအဖုံးမပါဘဲရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဖုံးအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်သံမဏိကောက်ရိုးကိုအသုံးပြုရန်အကြံပေးသည်။
ဖန်ခွက်၏စွမ်းရည်သည် ၁၆ အောင်စဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူကြိုက်အများဆုံးအရွယ်ဖြစ်ပြီးလူတိုင်းအတွက်သင့်တော်သည်။ အပေါ်ကပုံထဲကနေ၊ အတွင်းနံရံရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့အရောင်ကိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ဖန်ဟာပိုပြီးခမ်းနားလှပါတယ်။ ဤသည်စိတ်ကူးသည်မိသားစုအသုံးပြုခြင်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ ပါတီပွဲအတွက်ဖြစ်စေအလွန်ကောင်းသည်။ လူတိုင်းကသူ့အကြိုက်ဆုံးအရောင်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးဘယ်တော့မှဒီဖန်ခွက်ကိုနောက်တစ်ခါပြန်ဆုံးရှုံးဖို့မစိုးရိမ်ဘူး
ရှေ့သို့ ၁၆ အောင်စ - ၁၆ အောင်စ Lid & Reusable Straw ပါသော Charmlite ကုတ်နံရံ Tumbler ဖလား
နောက်တစ်ခု: ချစ်စရာရေခဲမုန့်စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်နှင့်အတူ Charmlite 3D ကာတွန်းတိရိစ္ဆာန်ခွက်များ
နှစ်ထပ် Wall လက်ဖက်ရည်ဖလား
Charmlite insulator တွင်လည်းကြည့်ရှုသည့် Double Wall Tumbler Cup ...